Ukuzila ukutya kunye nomthandazo Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukukhawuleza kunye nomthandazo
Sakhe samva umntu ephawula ukuba bayazila, banokungafuni ukutya ukuzalisekisa isithembiso sabo, nangona kunjalo; Ngaba ukuzila ukutya kuthetha kuphela ukuyeka ukutya ixesha elifutshane? Ilizwi likaThixo lisifundisa njani ukuzila kunye nomthandazo sivumele indlela ebalulekileyo yokuhlangana naye.
1 Ukukhawuleza nokuthandaza; Umahluko kunye nokufana:
1.1 Iindidi zokuzila ukutya
1.2 Ukukhawuleza kunye nomthandazo
Ukukhawuleza nokuthandaza; Umahluko kunye nokufana:
Indlela eyaziwayo yokomoya phakathi kwamaKristu kukuzila. Amakholwa acinga ukuba eli dini lizisa njengesixhobo ukomeleza umoya ngendlela esondeleyo neyoyikekayo kuThixo uYise kunye nomdali.
Ilizwi likaThixo lisivumela ukuba sichaze ukuba xa umntu esala ukwanelisa iimfuno zokuqala ezinje ngokutya; Kwenziwa kwacaca emehlweni kaThixo ukuba kubaluleke ngakumbi kulowo uzinikeleyo ukufumana ukutya kokomoya, kunokwenyama.
Eyona ntsingiselo iphambili yokuzila ukutya kuthetha ukuyeka, oku kutya, kunokuba yinxalenye okanye kunokuthetha ukungakhathali, umzekelo; Unokukuphepha ukutya ukutya okuthile (njengoko kubonwe kwisithethe secawa ngokungatyi inyama ebomvu ngeentsuku ezithile ze-Ista) okanye ungakuphepha ukutya konke konke kusasa, okanye usuku lonke.
Ke ngoko, sihlala sicinga ukuba ukuzila ukutya kubandakanya ukuyeka ukutya. Ngoku, ukuzila ukutya akusoloko kuthetha ukuhlangana kwakhona noThixo; amaxesha amaninzi, le ndlela yakudala isetyenziswa gwenxa, xa; uyayeka ukutya ngenxa yezizathu zobuhle kunye namampunge, ukuze abonakale njengomntu ozinikelayo okanye acinge ukuba ungumKristu olungileyo kuba engatyi.
Ukuzila ukutya akumenzi umntu abe ngcwele, njengayo yonke indlela yokuziphatha, kufuneka ihambisane nezinye izinto ezinxulumene noko. Ukuzila okwenyani njengesiko lokomoya kufuneka kube kukufuna indlela yokunyaniseka noThixo, ukummamela ngathi nangokholo olukhulu, ukusenza abathathi-nxaxheba elizwini nakwimiyalelo yakhe.
Ukuzila ukutya kuthetha ukugxila ekondleni umoya nasekufuneni uThixo njengeyona ndawo iphambili; ibonisa ukondliwa ngokomoya okunikezwa lilizwi likaThixo. Olu phenyo kufuneka lube lolokuzithandela, ke ngoko, umthandazo kunye nokuzila ukutya kufuneka nako. Kuyacetyiswa, ngexesha lokuzila, ukuba uphathe ibhayibhile kwaye uphumle kwindawo evumela ukusondelelana noxolo kunxibelelwano olulindeleke kunye nomdali uBawo.
Iindidi zokuzila ukutya
Ukuzila ukutya akufuneki kwenzakalise into ephilayo, kuba ukuba umzimba wento ephilayo wenzakele ngendlela eyaziyo, uyamcaphukisa uThixo kwaye uyeke ukwenza ingqiqo. ukuzila kunye nomthandazo.
Kubalulekile ukuba wazi iintlobo zokuzila okucetyiswa lilizwi likaThixo; Enye yezona zinto zixhaphakileyo phakathi kwamakholwa kukuzila ukutya, okuthetha ukuba akutyiwa naluphi na uhlobo lokutya okuqinileyo kodwa ukutya kwamanzi kuvunyelwe, kungenxa yokuba ngale ndlela, ukuzila ukutya kunokuba lide kuba umzimba uhlala unamanzi.
Olunye uhlobo lokuzila luzithathela ingqalelo iyonke, oku kuthetha ukuba ungatyi nakuphi na ukutya okanye usele nayiphi na into, ngenxa yoko uwugcine umzimba ekungeniseni nasiphi na isondlo; Olu lolona khawuleza lwaziwa kakhulu kwaye kufuneka lwenziwe ngamaxesha amafutshane eeyure ezingama-6 ukuya kwezingama-24 ubuninzi, ukuba ufuna ukwandisa ukuziyeka kufanele ukuba kube phantsi kweliso lonyango.
Ukuzila ukutya okuyinxalenye kusekwe ekutyeni ukutya okuyimfuneko ukugcina umzimba wondlekile, kodwa ngokwamanani aphakathi kwaye oku kutya akufuneki kube kukuzonwabisa; Ngokwesiqhelo inyama kunye neziselo eziqulathe utywala kufuneka zithintelwe.Le ndlela yokuzila iyacetyiswa kwabo banesifo nasiphi na isifo esibathintelayo ekuyekeni ukutya izondlo, ezinje ngesifo seswekile.
Isibonelelo sokuzila ngokukhawuleza kukuba sinokude, kuba umzimba awonzakaliswanga kukutya ukutya okunamafutha asezantsi, njengoko bekunokwenzeka kwimeko yokuphelisa ngokupheleleyo. Oku kuzila ukutya okukhawulezileyo kunokwenziwa ngaphandle kokushiya iidessert, utywala kunye nenyama ebomvu kuphela. Logama nje kukho ukuyeka kwezinye iintlobo zokutya okumnandi kakhulu, ukuzila ukutya kuyasebenza.
Xa sithetha ngokuzila ukutya, ayibhekiseli kuphela ekushiyeleni ukutya ecaleni, ezinye iintlobo zokuzila ukutya zinokuthetha, ukuziyeka ngokwesondo, ukuphepha ukuya emathekweni, ukuyeka ukubukela umabonwakude kangangeentsuku; okoko nje into entle ibekelwe bucala ukutyala elo xesha ekufumaneni kwakhona uThixo.
Zihamba kunye njengoko kuchaziwe ngaphambili. Phantse yonke imigaqo ikhona el mundo, mema umthandazo; Oku kungenxa yokuba ngale ndlela umphefumlo kunye nomoya kuyondliwa; Ukufunda ukuthandazela ikholwa elithembekileyo kufuneka kube sisiseko njengokufunda ukutya.
Umthandazo ungathathelwa ingqalelo njengesicwangciso sokuthobela uThixo kunye nelizwi lakhe, ngale ndlela umntu ozinikeleyo angabona xa esenza izigqibo ezimkholisayo uThixo, oku kufezekiswa ngenkqubo yokujonga ngaphakathi kunye nokubonakaliswa kwangaphakathi. Ukungathandazi kusika ikhonkco ngqo kunye nomdali kwaye kuthintela ukulunga nentando kaThixo ekungeneni entliziyweni yomntu.
Umthandazo uyasivumela ukuba sazi ukuba ingaba uThixo uyakholiswa na zizenzo zomKristu okanye, ngokuchaseneyo, ezi zigqibo ziyamcaphukisa; Akulindelekanga ukuva ilizwi liphuma ezulwini lisiyalela indlela yokuphila; Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ngokuthandaza nokucamngca umKristu othembekileyo kufuneka acinge ngezenzo zakhe zexesha elizayo kwaye aguquke kwabo bacaphukisa uThixo.
UThixo unika ubukho bakhe obungcwele entliziyweni yomntu evula iingcango zakhe kwaye ondle ukholo lwakhe ngelizwi, le ibhanile eyahlukileyo phakathi kwabantu abafuna ukumfumana uThixo emphefumlweni wabo; usasazo lokulunga, ukuthobeka kunye nokulahlwa kwento engento yanto.
EBhayibhileni, umthandazo uyagxininiswa, uboniswa njengeyona ndlela ibalulekileyo kuYesu Krestu. Ke ngoko, umntu kufuneka athandaze yonke imihla ukuba ubukho bukaThixo bunqwenelwa kwindlela yobomi.
Kubaluleke kakhulu ukuthandaza yonke imihla. Yonke imihla kwaye le nto ibalulekile entliziyweni yekholwa.
La umthandazo nokuzila ukutya Kuya kufuneka zihlale zihamba kunye, kuba zombini ezi zenzo zinenjongo yokufuna uThixo kunye nokuziqonda njengekholwa elidinga ukutya komphefumlo ebomini balo. Esinye isivakalisi esinokukunika umdla yile Umthandazo kuSanta Helena.
Umama Umnandi Umthandazo
Umthandazo Nkosi yam uYesu Krestu